कम्युनिष्ट नैतिकता र यौन प्रेम
कम्युनिष्ट नैतिकता र यौन पे्रमसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनको ऐतिहासिक अध्ययन र जीवनको भोगाइमा निकै ठूलो खाडल छ । नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको मूल समस्या भनेको हिन्दु मुस्लिम ढोंग र पाखण्ड मिसिनु हो ।
ढोंग र पाखण्डको अर्थ के हो भने बाहिर यौन–प्रेम र विवाहमा एकनिष्टता भट्याउने र भित्र जीवनमा त्यो कुरा लागू नहुने । हिन्दु पाखण्डी पण्डितहरु पनि बाहिर प्रवचनमा परमात्मामा लीन हुनुपर्ने उपदेजझबलतब यष्शि दिन्छन् भने भित्र यौन मामलामा लम्पट हुन्छन् ।
मुश्लिमहरु महिलाहरुलाई कुनै पनि मर्दको अनुहार नहेर्ने भनेर बुर्का लगाईदिन्छन्, आफूहरु चाहिं तीन पटक तलाक–तलाक भनेर बेश्याबृत्तिमा लीन हुन्छन् । हिन्दु दर्शनका ऋषिमुनिहरु बाहिर जंगलको कुटीमा रहेर तपस्याको ढोंग गर्दर्थे, तर उर्वर्शी र उर्मिला जस्ता सुन्दरीहरु चुरा खन्काउ“दै र तिघ्रा देखाउ“दै नाच्न थालेपछि तिनीहरुस“गै प्राण हाल्न तयार हुन्थे ।
बिष्णुका अवतार रहने राजदरबारहरुमा पनि यही ढोंग थियो भन्ने कुरा पनि हरेक राजा र रानीको जीवनचर्याबाट स्पष्ट हुन्छ । यही सामन्तवादको गहिरो छाप रहेको र पूँजीवादमा विकासशील देशमा एकातिर ढोंग र पाखण्ड छ भने अर्कोतर्फ पु“जीवादी अराजकता ।
त्यसकारण हाम्रो देशमा कम्युनिष्ट पार्टीभित्र र बाहिर सामन्तवादी ढोंग र पूँजीवादी अराजकता विरुद्ध लडे मात्र समाज र पार्टीमा साम्यवादी नैतिकता लागू हुनसक्छ ।
सोह्र सय गोपिनीलाई बस्त्रहीन बनाएर रुखबाट तमासा हेर्ने श्रीकृष्ण, ऋषिको हातबाट पायश(खिर
)खाएर गर्भ रहेको देखाउ“दै गुप्तरुपमा ऋषि विर्यदानबाट जन्मेको राम, पशुहरुका समेत पति हुनसक्ने पशुपतिनाथ वा महादेवलाई भगवान मान्ने र उनीहरुकै भजन गाउने हाम्रो समाजका मानिसहरु पनि ढोंगी छन् । ती मानिसहरु आफूले त्यही काम गर्दा उचित र न्यायसंगत ठान्दछन् र अरुले गर्दा अपराध ।
उदाहरणको लागि मेरा एक जना छिमेकीले मेरो भाइसँग कुरा गर्ने क्रममा “दुई जोई ल्याउनेको सन्तान” भनेछन् । भाइले जवाफ दिएछ–‘सन्तानकै कुरा गर्ने हो भने त तपाईका माइला दाइले भर्खरै ल्याएकी जोईसँग सातवटी भए’ भनेपछि छिमेकी बोलबोल माछा मुखभरी पानी भएछन् ।
अर्को उदाहरण, हाम्री छोरी जन्मिएपछि हामीले उसको फोटा फेसबुकमा राखिदियौं । सयौंको संख्यामा प्रतिक्रिया आए । तीमध्ये सयमा पन्चानब्बे प्रतिशत सकारात्मक प्रतिक्रिया थिए भने केही व्यंग्य मिसिएका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनेमा एकजना हाल झापामा रहेका जिम्मेवार कमरेड पनि रहेछन् । म्यासेजमा छोरासँग उनको भनाभन परेछ । उनले मलाई अश्लित गाली गर्न पनि पछि परेन छन् । पछि थाहा भयो ती व्यक्ति रहेछन्–काठमाडौंको एउटा होटेलमा एकजना केटीसँग मस्ती मारिरहेको बेला पुलिसद्वारा रंगेहात पक्राउ परी काठमाण्डौं हनुमान ढोकामा थुनिने र झापामा पार्टीको दोसल्लामा छिपेर गोरु तस्कारी गर्ने अपराधी । यस्ता छन् हाम्रो समाजका मान्छे र त्यो समाजबाट हाम्रो पार्टीमा भर्ती भएका कमरेड ।
यहाँ मेरो बहसको विषयबस्तु चाहिं कम्युनिष्ट नैतिकता र यौन प्रेम हो । समस्या के रहेको छ भने नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा पार्टीभित्र यौन मामलालाई लिएर मात्र नैतिकता विरुद्ध गएको भनी आरोप लगाउने र कार्वाही गर्नेस तर विचारधारात्मक तथा राजनैतिक रुपले विचलित, दुश्मनका सामु आत्मसर्मण गरेका, आर्थिक भ्रष्टाचारमा डुबेका, बेश्यागमनमा पतित र बलात्कारीलाई उच्च पदमा बढुवा गरेर सम्मान गर्ने ।
मैले जानेको कम्युनिष्ट नैतिकता भनेको मालेमावादी सिद्धान्तलाई देश, काल र परिस्थितिको विशिष्टतामा लागू गर्ने र संशोधनवादका विरुद्ध लड्ने, बहुसख्यक शोषित पीडित श्रमजीवी जनसमुदायको मुक्तिका खातिर ज्यानलाई जोखिममा राख्न तयार हुनु र दुश्मनप्रति असीम घृणा प्रकट गर्नु, कठिनाईको सामना गर्न अघि बढ्नु र सुविधा भोग्न पछि हट्नु, आर्थिक मितव्ययिता अपनाउनु र हर भ्रष्टाचारको विरोध गर्नु हो ।
यौन प्रेम र विवाहका सवालमा नैतिकता के हो र अनैतिकता के हो रु यो आज कम्युनिष्ट पार्टीका लागि गम्भिर प्रश्न बनेको छ । यौन–प्रेम र यौन विचलन, एकनिष्ठता र बहुनिष्ठता जस्ता विषयलाई कसरी बुझने ?
माक्र्स र एंगेल्स अधिभूतवादी आर्दशवादी होइन,द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादी हुनुहुन्थ्यो । त्यसकारण उहाँहरुले सामाजिक जीवनका बहुआयामहरुको अध्ययन गर्नुका साथै सैद्धान्तीकरण गर्ने काम पनि गर्नुभएको छ । उहाँहरुले साम्यवादी सिद्वान्तलाई दराजमा थन्काएर राख्नु भएन, जीवनमा नै लागू गर्नुभयो । माक्र्स र एंगेल्सको जस्तो अनन्य मित्रता आजका कम्युनिष्टहरुमा विरलै देख्छौं । जेनी र माक्र्सको जस्तो यौन–प्रेम पनि दुनियाँमा कमै पाइन्छ ।
दुःख र प्रेममा उहाँहरुको समान सहभागिता थियो । जेनीले एउटा संस्मरणमा लेख्नुभएको छ, ‘दुःखले मानिसलाई स्पात बनाउँछ भने प्रेमले उत्साहित पार्छ ।’ आफ्नो डेरामा कमरेडहरु र पाहुनाहरु आउँदा उहाँहरुले हर्षका साथ स्वागत गर्नुहुन्थ्यो । हाम्रो नेताका श्रीमतीहरु भए ‘कसैले ल्याउनु छैन, लिने मात्र’ भनेर मुख बंग्याउँदै ओझेलमा पर्थे होलान् । जोडीहरुको चेतनास्तर नमिल्नुका साथै परिवारजनहरु लोभी पापी भए भने त्यो पनि प्रतिक्रान्तिको श्रोत हो भन्ने कुरा नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका पछिल्ला घटनाक्रमहरुले पुष्टि गरेका छन् ।
जेनी माक्र्स जस्तो जीवनसाथी पाउँदा पाउँदै पनि कार्ल माक्र्सको सहयोगी हेलेन डेमुटसँग राम्रो सम्बन्ध थियो । माक्र्स रिसाउँदा हेलेन डेमुटले मात्र रीस झार्न सक्थिन्, तर त्यही आधारमा उहाँमाथि यौन विचलनको आरोप लागेन । एंगेल्सले विवाह गर्नुभएन तर एक जना आइरिस साथी राख्नुभयो । ती पे्रमिका मरेपछि फेरि उनकै बहिनीलाई प्रेमिकाकै रुपमा राख्नुभयो ।
माक्र्सवादलाई आफ्नो विशिष्टतामा लागू गर्ने लेनिन र स्टालिन महान् नेताहरु हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरुले माक्र्सवादलाई लागू मात्र गर्नुभएन, यसको विकास पनि गर्नुभयो । भर्खरै क्रान्ति सम्पन्न भएको थियो । महिला नेतृ क। कोलोन्ताईको अप्रत्यक्ष नेतृत्वमा “यौन स्वतन्त्रता”को आगो सल्किएको थियो । क्लारा जेट्किनले लेनिनसँग कुराकानी गर्नुभयो र लेनिनले भन्नुभयोः “सर्वहारा क्रान्ति अनुरुप नै विवाह र यौन सम्बधका क्षेत्रमा पनि क्रान्ति हुनेछ’“।।।म एक गिलास पानीको सिद्धान्तलाई पूर्ण रुपले गैरमाक्र्सवादी मान्दछु, यति मात्र होइन, समाजविरोधी पनि मान्दछु ।’ ‘।।।निसन्देह प्यास त मेटाउनुपर्छ । तर के कुनै सामान्य मान्छेले सामान्य स्थितिमा फोहोरमा बसेर नालीको पानी पिउनसक्छ रु के उसले यस्तो गिलासमा पानी पिउन सक्छ, जुन गिलासमा दर्जनौंले जुठो हालिसकेका छन् र ? ”।
म आफ्नो आलोचनाद्वारा सन्यासको पाठ त पढाउन चाहन्न, कत्ति पनि चाहन्न । साम्यवादले आफूसँग सन्यास होइन, बरु जीवनको आनन्द, जीवनशक्ति सिर्जना गर्नेछ र एउटा सन्तुष्ट प्रेम–जीवन यसमा सहायकसिद्ध हुनेछ । तर, मेरो बिचारमा यौन मामलाबारे यति विशाल अतिरन्जना जुन आज देखापरेको छ, यसले जीवनमा आनन्द र शक्ति भर्दैन, यसको विपरीत जीवनबाट यो कुरा खोसेर लैजान्छ ।
"क्रान्तिको समयमा यो खराव कुरा हो , धेरै खराब ।” यहाँ लेनिनले एउटा निस्कर्ष के निकाल्नुभएको छ भने न यो स्त्रीको विश्वास गर्न सकिन्छ ‘जसको निजी रोमान्स राजनीतिसँग लिपटिइरहन्छ” न त्यस्तो पुरुषमा विश्वास गर्न सकिन्छ‘ जो हरेक केटीको फन्दामा पर्छ ।’
सिद्धान्तमा यसो हुँदाहुँदै पनि इनेसा आरमन्डले त लेनिनलाई यस्तो चिठी पो लेखेकी छन्ः
“तिमी र म छुटिएका छौं, हामी छुटिएका छौं, मेरो प्रिय १ मलाई थाहा छ, म अनुभूति गर्छुः अति घनिष्ट वस्तीहरुलाई संझँदै तिमी यहाँ कहिल्यै फर्कने छैनौं, मेरो जीन्दगीमा यहाँ पेरिसका कति विशाल वस्तीहरु तिमीले उपयोग ग¥यौ,मैले स्पष्ट रुपमा पहिचान गरेँ, यसअघि मैले यस्तो कहिल्यैं गरिन, त्यसकारण करीब पेरिसका सम्पूर्ण गतिविधिले तिम्रा विचारहरुलाई हजारौं धागोले बाँधेका थिए ।
त्यो समयमा म निश्चितै रुपमा तिमीसँगको प्रेममा थिइन, तथापि मैले तिमीलाई धेरै माया गर्थेँ । त्यो क्षणमा तिमीलाई चुम्बन नगरिकनै रहन सकेँः तिमीसँग भेटघाट र कहिलेकहीँ कुराकानी गरेमा मात्र खुशी हुनुपथ्र्यो । अनि यसले कसैलाई हानी गर्न सक्तैन्थ्यो‘।।”
कति प्रेमपूर्ण चिठी छ । आखिर चुम्बनको तगारो त क्रुप्सकाया थिइन होला । सँगै बस्थे क्रुप्सकाया,इनेसा आरमण्ड र लेनिन –पेरिसमा ।
स्टालिन हिटलर र हिटलरपंथीहरुसँग कडा हुनुहुन्थ्यो र हुनैपर्छ ती जनताका ज्यानी दुश्मनसँग । दक्षिणपंथी, संशोधनवादी र प्रतिक्रियावादीहरुले एउटै शिविरमा बसेर स्टालिनलाई हिटलर जस्तो फासिष्टसँग गिराउन खोज्दछन् । स्टालिन महान् माक्र्सवादी–लेनिनवादी नैतिकताको पक्षपाती हुनुहुन्थ्यो र भइरहनुहुनेछ ।
अर्कोतिर स्टालिनको आफ्नो जीवन थियो । यौन–प्रेम थियो, आफ्ना कमजोरी थिए । यौन विवाहकै कुरा गर्ने हो भने पहिलो श्रीमती क्षयरोगका कारणले मरेपछि नादेज्दा अलिलुइयसँग दोश्रो विवाह गर्नुभयो । उनीसँग पनि पछि गएर भनाभन भयो,आत्महत्या गरिन् अलिलुइयाले । सन् १९०९ तिर सल्वीचेगोत्स्कमा भूमिगत रहँदा तातियाना सुखोभा नामक केटी साथी पनि थिइन् । त्यतै बस्दा अर्की एउटी किसान विधवा पनि थिइन । तीबाट कोन्स्तान्तिन नामक बच्चा पनि पाए ।
विचारधारात्मक दृष्टिले रोजा लक्जेम्वर्ग लेनिनकै हाराहारीकी नारी नेता हुनुहुन्थ्यो । त्यसको मतलव उहाँ त यौन प्रेमकै कुरा गर्नुहुन्नथ्यो भन्नु ढोंग र पाखण्ड हो । उहाँ क्लारा जेट्कनको छोरा जोगिचेसँग विवाह नगकिनै प्रेमी प्रेमीका भएर बस्नुभयो ।
माओत्सेतुङ्ग तेश्रो नयाँ चरणको माक्र्सवादका स्रष्टा हुनुहुन्थ्यो । उहाँको क्रान्ति र विचारधारामा महान् योगदान छ भन्ने कुरा दुनियाँलाई थाहा छ । उहाँको यौन प्रेम र विवाह सवालमा पनि खुब कुरा गरिन्छ । बाबुले काम खानका लागि १४ वर्षको माओसँग २० वर्षकी बुहारी विवाह गरिदिएका थिए । ती महिलासँग माओले श्रीमतीसँगको व्यवहार नै गर्नुभएन ।
बेइजिङ्ग बस्दा आफ्नै गुरुकी छोरी याङ्काई– हुई सँग प्रेम विवाह गर्नुभयो । १९२८ मा याङ्काई–हुइ दुई बच्चासहित दुश्मनद्वारा मारिनुभयो । त्यसपछि होचे–नियासँग विवाह भयो । भनिन्छ दुई लाइन संघर्षमा होचेनियाले वाङ्गमिङ्गलाई साथ दिनुभयो । अन्ततः येनानमा साहित्यकला गोष्ठीका सिलसिलामा चलचित्र अभिनेत्री चियाङ्ग चिङ्गसँग प्रेम बस्यो । ४८ वर्षको माओ र २९ वर्षकी चियाङ्ग चिङ्गबीच पार्टीभित्र विवाद हुँदाहुदै पनि प्रेम टुट्न सकेन ।
जनयुद्ध नेपालको इतिहासमा एउटा गौरवशाली पर्व हो । त्यस महान् क्रान्तिले यौन प्रेमलाई जीवनको एउटा महत्वपूर्ण पक्षको रुपमा प्रज्वलित गरेको थियो । निश्चय नै इतिहासमा यौन प्रेमको नाममा नियोजित राजनैतिक षड्यन्त्रहरु भएका छन् । जनयुद्धमा बाहिरी दुश्मनद्वारा त्यति धेरै हुन पाएन । क. बादल र हिमालीसँगको यौन–प्रेमले हँगामा मच्चाएकै हो । अन्ततः उहाँले पनि परम्परा तोडन् सक्नुभएन । त्यस सिलसिलामा माथिदेखि तलसम्म दजनौं यौन–प्रेमका घट्नाहरु छन् ।
ती घटनाहरुबारे आफ्नो एउटा लेखमा नरेन्द्रजंग पिटरले धेरै प्रष्ट पार्नुभएको छ । मेरो नाम पनि त्यस सन्दर्भमा प्रष्ट आउँछ । त्यतिबेलाको मेरो यौन–प्रेम होइन यौन विचलन थियो । यौन र प्रेमका विषयमा मोहनविक्रम सिंहको नाम सर्वाधिक चर्चामा आउँछ । चालीसको दशकमा उनलाई हामी आफैले पनि राजनैतिक भण्डाफोर नभएर यौन भण्डाफोर गर्दथ्यौं । त्यतिबेला पार्टीले विद्या ढकाल ‘जलजला’ सँग विवाह गर्न दिएन । अन्ततः बूढो उमेरमा आएर दुर्गासँग विवाह गरेरै छाड्नुभयो । बुर्जुवा पार्टीहरुमा पनि त लेनिनले भने झैं “एक गिलास पानी”कै सिद्धान्त चलिरहेको हुन्छ ।
एउटा वैवाहिक सम्बन्ध तोडिएर अर्को हुँदैमा एकनिष्टताको सिद्धान्तमा बिचलन हुँदैन । यौन अराजकतालाई मान्यता दिनुपर्दछ भन्ने भनाइ मेरो होइन । तर एकनिष्टता पनि पुँजीवादी व्यक्तिगत सम्पत्तिको रक्षा गर्न महिलामाथि मात्र लागू हुने देखिन्छ । यौन प्रेमको प्रकृति एकान्तिक भएकाले एकनिष्टतालाई मान्यता दिनु स्वाभाविक हो । आखिर साम्यवादमा एकनिष्ठता कस्तो रहने छ’
‘परिवार,निजी स्वामित्व र राज्यको उत्पत्ति’मा एंगेल्सले लेख्नुभएको छ:
“पुँजीवादी उत्पादनको आसन्न विनाशपछि यौन सम्बन्धको स्वरुप कस्तो होला, त्यसको बारेमा आज हामी केवल नकारात्मक अनुमान गर्नसक्छौं, अहिले हामी यति मात्र भन्नसक्छौं कि के कुरा त्यसबेला रहने छैन । परन्तु त्यसमा कुन चाँहि नयाँ कुरा थपिनेछ । यो त्यस समयमा निश्चित हुनेछ, जब एउटा नयाँ पिंढी जन्मनेछ–यस्तो पुरुष पिंढी जसले जीवनभरि कहिल्यै कुनै नारीको शरीर पैसा दिएर या सामाजिक शक्तिको कुनै अन्य साधनद्वारा किन्ने मौका मिल्ने छैन, अनि यस्तो नारीहरुको पिंढी जसले कहिल्यै सच्चा प्रेम सिवाय अरु कुनै कारणले कुनै पुरुषको अगाडि आत्मसमर्पण गर्न विवश हुनुपर्ने छैन, न उनीहरुलाई आर्थिक परिणामको भयले आफूलाई आफ्नो प्रेमी सामु आत्मसर्मपण गर्न कहिल्यै रोक्नुपर्ने ।
जब एकपटक यस्ता नारी पुरुषले यो दुनियाँमा जन्म लिनेछन् तब उनीहरु यस कुरामा अलिकति पनि चिन्ता गर्ने छैनन् कि आज हाम्रो विचारमा उनीहरुले के गर्नुपर्छ । उनीहरु स्वयं तय गर्नेछन् कि उनीहरु के गर्नुपर्छ र त्यस अनुसार उनीहरु स्वयं नै प्रत्येक व्यक्तिको आचरणको बारेमा जनमत निर्माण गर्नेछन्–बस मामला समाप्त हुनेछ ।”
मैले भन्न खोजेको सार कुरा के हो भने हामी व्यक्तिगत पुँजी सुरक्षित गर्न विकास गरिएको एकनिष्ठ विवाहको कुरामा मात्र चिप्की राख्नु हुँदैन । साम्यवादी एकनिष्ठताको विकास गर्नुपर्छ । यौन–प्रेमलाई यौन विचलनका रुपमा मात्र हेर्न हुँदैन । सहमतीय सहवासलाई पनि यौन विचलन भन्न हुँदैन । अर्को कुरा पुरानो परिवारमा प्रतिक्रियावादी तत्व हावी भयो भने त्यहाँ पनि क्रान्तिकारी पक्षले विद्रोह गर्नुपर्छ या विवाह सम्बन्धमा विच्छेद हुन्छ । व्यवहार र इतिहासले के पुष्टि ग¥यो भने परम्परागत एकनिष्टता गलत सावित भयो ।
सिद्धान्त त जीवनका लागि हुनुपर्दछ यौन कुण्ठाले कहिल्यै पनि स्वतन्त्र र सरस मानव जन्माउँदैन । त्यसैले माक्र्सले ‘हेगेलको अधिकार दर्शन’मा यौन क्रियाकलापलाई सामाजिक संरचनाबाट एकपटक बाहिर राखेर हेर्ने हो भनेः “यौन क्रियाकलाप शरीरको सर्वोच्च रुप हो” भन्नुभएको छ ।
मेरो अझ सार कुरा के हो भने नेपालको कम्युुनिष्ट पार्टीमा नैतिक कार्वाहीको लागि यौन विषयलाई प्रमुख र मुख्य बनाइयो । आर्थिक भ्रष्टाचारीहरु, गुटबाजहरु, प्रतिक्रियावादीहरुसँग साँठगाँठ गरेर पार्टीको गोपनियता खोल्नेहरु बडो नैतिकवान भएर नेता भइरहेको छन् । द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिवादको सट्टा आदर्शवादी दर्शन बोक्नेहरु नैतिकवान ठहरिए । यस विषयमा आगामी दिनमा तथ्यसहित भ्रष्टाचारीहरुको भण्डाफोर गर्नुपर्ने भएको छ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट